SARIPIKA: Lanitra Manga Mahafinaritra Tao Dhaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Novambra 2013 14:10 GMT
Vakio amin'ny teny English, فارسی, Dansk, 日本語, Español, বাংলা
Rahona fotsy mirirandrirana eny amin'ny lanitra. Misy vorona tokana manidina. Sary avy amin'i Ashraful Alam, Baily Road, Dhaka. Nahazoan-dalana ny sary.
Manana vanim-potoana enina ny alimanaka Bengali, ka roa volana isaky ny vanim-potoana. Vanim-potoana Hemonto (হেমন্ত) no iainana amin'izao fotoana izao na fotoanan'ny maintany. Mandritra ity vanim-potoana ity, manana loko mihovitrovitra ny lanitra, manga ny faratampony ary loko fotsifotsy no manaloka ny hariva somambisamby, ary manafàna ny rivotra ny masoandro.
Toy izao no zava-nisy tamin'ny 17 Novambra 2013, hatsaran'ny lanitra mahavariana mandrakotra ny faravodilanitra eo ambonin'ny renivohitr'i Bangladesh, Dhaka. Nihanaka tahaka ny afomanga tao amin'ny media sosialy ny resaka mikasika izay hitan'ny maso ka nizara ireo sariny mahafinaritra tao amin'ny Facebook sy Twitter avokoa ny mpiserasera, ny sasany nampiasa teny ifankafantarana #Dhakasky. Na dia ny gazety aza mba nanasongadina ireo sary ihany koa.
Mpanao gazety sady bilaogera Simu Naser (@simunaser) nanoratra hoe:
Oay e. Mijery ny rojom-baovao, toa mivoaka mijery lanitra avokoa ny tsirairay ka mandao ny asany rehetra. Mahafinaritra izany.
Torongo (@ttorongo) nilaza hoe:
Gaga aho nahita ny lanitra androany atoandro, misy loko manga sy fotsy misoriadriaka eny amin'ny faravodilanitra. Toa nahamarika izany avokoa ny tsirairay. Nahita ny teny ifankafantarana #Dhakasky koa aza.
Shafiul Alam (@shafiulnub) nankafy ny volana ihany koa:
Nandritra ny tontolo andro, mahafinaritra ny lanitra, amin'izao fotoana izao, ny volana indray no mangalatra manao fampisehoana.
Atif M Safi nisioka sary masoandro mody Instagram:
Ny hatsaran'ny #lanitra androany #masoandromody #rahona tao Dhaka
Nizara sarin'ny lanitra tao amin'ny Twitter ihany koa ny sisa hafa:
Talaky mason'i #Dhaka
Vorona fihaza…Lanitra ao Dhaka #dhakasky (ao amin'ny tranobe Nitol-Niloy)
Mpiserasera maro nandrakitra sary #Dhakasky. Navoakan'ny Global Voices indray ny sary sasany izay nahazoan-dalana:
Rahona manify mahafinaritra, tsara hanaovana papango taratasy. Sary avy amin'i Tanmoy Kairy, Dhanmondi, Dhaka.
Lanitra ao an-trano. Sary avy amin'i ahmedur Rashid Tutul.
Iza no nmpitsingevaheva ny rahon-tsambo eny an-danitra? Sary avy amin'i Suronjona Haque.
Ny lokon'ny masoandro mody eny an-danitra. Sary avy amin'i Hasan Ahmed Khan. Mirpur, Dhaka
Nandoko ny tenany ny lanitra. Sary avy amin'i Manju Ahmed. Mohammadpur, Dhaka.
Tao amin'ny YouTube, nizara lahatsary ahitana lanitra i Abhie Zibran: